Waa Maxaay ujeedada hadalka Xeer Ilaalinta Qaranka ee Dhoofinta Dhuxusha - Muqdisho Online
Home Wararka Waa Maxaay ujeedada hadalka Xeer Ilaalinta Qaranka ee Dhoofinta Dhuxusha
Waa Maxaay ujeedada hadalka Xeer Ilaalinta Qaranka ee Dhoofinta Dhuxusha
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa maanta soo saaray War-saxaafadeed ku Saabsan soo Saaridda iyo Dhoofinta Dhuxusha. Hadalka ka soo yeeray xeer ilaalinta ayaa u muuqda mid eedeyan dadban loogu soo jeedinayo madaxda Jubbaland.
War saxaafadeedku waxa uu u qoraa sidan:-
 Soo saaridda iyo dhoofinta dhuxushu waxay saamayn laxaad leh ku leedahay xaalufinta deegaanka, waxayna il wayn oo dhaqaale u tahay argagixisada.
Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranka wuxuu uga digayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudahiisa ama dibaaddiisa kuna lug leh dhoofinta dhuxusha sharci darrada ah inay joojiyaan faldanbiyeedkaa waxayna wajahayaan ciqaabta ka dhalata fal-danbiyeedkaas sida ku xusan
Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.
Si arrintaa wax looga qabto Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa la kaashanaya Booliska Soomaaliyeed guud ahaan iyo ka Dawlad-Goboleedka Jubaland gaar ahaan.
Xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranka wuxuu ka digayaa in doomaha iyo maraakiibta lagu raro dhuxusha in lala wareegayo iyadoo loo marayosida ay qabaan shuruucda dalka.
Inkastoo ayan jirin wax cadayn oo sheegaya in Jubbaland dhoofiso Dhuxusha ayaa hadana dowladda fedaraalka waxa ay eedeyn u jeedisay madaxda Jubbaland.
Previous articleKenyan al-Shabaab returnees recount stories of pain and fear
Next articleOdayaasha Hawiye oo sheegay in aay iska dulqaadi doonaan madax aarsi qabiil u timid (Dhageyso)
Milkiilayaasha cusub ee Gud. Gobolka Banaadir! sidee ku yimid, yaa keensaday?
Dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda oo ka dhacay Dayniile
Hawada, dhulka iyo Badda Kismaanayo oo dib loo furay, bilaabayna howlahoodii
Wararka Reportor - August 24, 2019
Madaxweyne Farmaajo waxa uu Dhowr cesho ka hor si lama filaan ah ku magacaaabay Cumar Maxamud oo loo yaqaano Cumar Finish. Cumar ayaa ka...
Wararka Faysal - August 24, 2019
Waxaa faafaahin dheeraad ah ka baxaysaa khasaaraha ka dhashay iska horimaad xooggan oo ka dhacay Xaafadda Saban Saban ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir...
Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa sheegtay in Magaaladda Kismaayo ee Xarunta maamulka Jubbaland ay dib u shaqooyinkoodii u bilaabeen xarumihii dowladda sida garoonka diyaaradaha, Dekeda...